Hlala unolwazi ngamacebiso akamuva okuhlela uhambo phakathi
ne-COVID-19 nangemva kwayo.
Sicela umphakathi we-Airbnb ukuba ulandele izinqubo zethu zempilo nokuphepha ze-COVID-19.
Ababungazi kumelwe balandele inqubo yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu esekelwa ochwepheshe.
Inqubo yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu, esekelwa ochwepheshe ihloselwe okungaphezu kokuhlanza okuvamile futhi iyisinyathelo esibalulekile Ababungazi abangasithatha ekuqinisekiseni ukuphepha komphakathi wethu.
Ubani okudingeka alandele iziqondiso ezintsha zokuphepha nokuhlanza?
Bonke Ababungazi kudingeka balandele izinyathelo zethu ze-COVID-19 zokuphepha nokuhlanza. Funda kabanzi ngokuHlanza Okuthuthukisiwe Kwe-Airbnb.
Uma imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna kanjalo, bonke Ababungazi nezivakashi kumelwe bagqoke isifonyo noma into yokwemboza ubuso uma bekhuluma nomuntu futhi baqhelelane ngamamitha angu-2. Futhi, situsa nokuba ungabungazi noma uthathe uhambo uma uye wachayeka noma uma unezimpawu ze-COVID-19. Buyekeza izimfuneko zempilo nokuphepha ezindaweni zokuhlala.
Uma udinga ukushintsha noma ukukhansela ukubhukha kwakho, vakashela ingxenye ethiUhambo kuwebhusayithi noma ku-app ye-Airbnb ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngezindlela zakho zamanje zokukhansela. Sisungule le nsiza ukuze sisize izivakashi zinavigeyithe izinqubo nezinqubomgomo zokukhansela.
Ngaphezu kwalokho, izivakashi ezingakwazi ukuvakasha ngoba zigula ziphethwe yi-COVID-19 zingase zifanelekele ukukhansela ukubhukha kwazo bese zibuyiselwa imali ephelele ngokuthintana nabosizo lwamakhasimende. Funda kabanzi ngoMthetho wethu wezimo ezingalindelekile.
Uma ungathanda ukuba noKokuzithokozisa neqembu lakho kuphela, ungacabangela ukubhukha okuphrayivethi. Uma uzizwa ungakhululekile ukuhlangana ngamaqembu noma uma Okokuzithokozisa okungokoqobo kungakavulwa kabusha emakethe yakho, hlola Okokuzithokozisa Kwe-inthanethi.
Izinqubomgomo zokukhansela zisethwa Ababungazi, futhi ziyahlukahluka ngokwezindlu. Ungathola imininingwane mayelana nenqubomgomo yokukhansela yendawo ngayinye yokuhlala ekhasini eliyinhloko lendlu ngayinye. Sifake isihlungi sokusesha esisha ukuze sikwenzele kube lula ukuthola izindawo ezinezinqubomgomo zokukhansela okuvumelana nezimo. Funda kabanzi ngesihlungi esisha.